Lesona.ly: Fampiharana fampianarana sy fianarana | Martech Zone
Zoma, Desambra 13, 2013 Zoma, Desambra 13, 2013 Douglas Karr
Indraindray, indrindra amin'ny haitao, izay tianao hanome lesona haingana sy mora ho an'ny sehatrao. Ohatra, nivelatra izahay CircuPress ho toy ny mailaka fandefasana mailaka ho an'ny WordPress… saingy mila dingana vitsivitsy hanamboarana izany. Afaka nanao horonan-tsary mampiseho ny fanaingoana azy izahay, saingy mila miato / manohy ny mpampiasa rehefa mijery sy manamboatra ny kaontiny izy ireo. Fa kosa, mametraka fotsiny izahay a Fitsipika momba ny CircuPress lesona miaraka amin'ny Lesona - ampiarahina amin'ny quiz - hahazoana antoka fa miala amin'ny tongotra ankavanana izy ireo!
Raha vantany vao nahavita ny lesona sy ny quiz nataonao ianao dia nomena karatra tatitra tsotra sy tsotra:
Lesona dia naorin'ny namantsika akaiky, Max Yoder, mpandraharaha eo an-toerana, mpitendry zavamaneno, mpanao horonantsary… ary tovolahy tsara manodidina.
Lesona mamela ireo mpampiasa azy hanangana lesona tsara tarehy sy marika amin'ny minitra tsy misy kaody kaody iray. Azonao atao ny manome lesona an'ireo mpiray antoka aminao na mizara ny lesona ampianarinao amin'ny rohy iray. Lesona.ly no hitantana ny fampahatsiahivana hahazoana antoka fa vita ara-potoana ny anjaranao. Endri-javatra ny Lesona ahitana:
fanendrena - Manomeza lesona samirery na mizara rohy ampahibemaso mba hahitana hoe iza no nandray ny lesonao ary oviana.
Groups - Azonao atao ny manendry olona iray na mamorona vondrona ao anatin'ny lesona hanendrena sy hitantanana ireo mpiray antoka aminao.
Quizzes - Jereo hoe hatraiza ny fahafantaran'ny mpampiasa anao tsirairay ny momba anao tamin'ny fanontaniana maro momba ny quiz.
Fanohanana sary sy horonan-tsary - mampiditra sary na horonan-tsary mora foana amin'ny lesonao.
Analytics sy Tatitra - Lesona mitazona ny rakitsoratry ny fampiofanana sy ny tantaram-panabeazan'ny mpiray antoka aminao - hatramin'ny fomba namaliany fanontaniana manokana ka hatramin'ny andro sy ora nahavitan'izy ireo ny fampiofanana ilaina sy tsy maintsy atao.
fanarahan-dalàna - Lesona manara-maso ny adiresy IP amin'ny fanarahan-dalàna.
Tags: fianaranafampiharana fampiharanafampiharana fampiharanalesonalesonaquizfampianaranafampiharana fampiharana